Xildhibaan C/llaahi Sh. Ismaaciil oo ka hadlay Mooshin ay ka geynayaan saldhiga Imaaraadka ee Berbera | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Xildhibaan C/llaahi Sh. Ismaaciil oo ka hadlay Mooshin ay ka geynayaan saldhiga...
Xildhibaan C/llaahi Sh. Ismaaciil oo ka hadlay Mooshin ay ka geynayaan saldhiga Imaaraadka ee Berbera
Xildhibaan C/llaahi Sheekh Ismaaciil oo ka mid ah Xildhibaanada Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadlay saldhiga Milateri ee Imaaraadka Carabta ka dhisanayo magaalada Berbera iyo sirta ku jirta.
Xildhibaanka ayaa sheegay inuu arrinta saldhiga uu si aad ah ula socday, maadaama uu yahay Xildhibaan u dhaartay, danta qaranka, tan dalka, dadka iyo diinta ilaalinteeda inuu daacad ka noqdo.
“Dalkeena midnimadiisa qarameed ilaalinteeda wixii taabanaya inaan u feejignaano ayaa naloo dhaaray, taas ayay ka mid tahay, waxa aan ula socday Saldhiga Imaaraadka Carabta ee Berbera.
C/llaahi Sh. Ismaaciil ayaa sheegay in Heshiiskii Saldhiga Berbera uu ahaa mid aysan ka war qabin dowladda dhexe, isagoo xusay in aanay aheyn mid la sahlan karo.
“Berbera ayaa heshiis lagula galay Imaaraadka Carabta, dowladda Dhexe aysan war u heyn, arrintaas ma ahan arrin la sahlan karo, heshiiskaas ma hirgeli karo, sharcina ma ahan”ayuu yiri Xildhibaan C/llaahi Sheekh Xasan oo wareysi siiyay Telefishinka Universal.
Mar uu ka hadlayay mooshinka ayuu sheegay in Kudladda Wadaniyiinta Baarlamaanka ay diyaarinayaan Mooshinka ka dhanka ah Saldhiga Berbera, isla markaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay Baarlamaanka u hor-geyn doonaan si looga doodo.
Waxaa uu heshiiyay istiraatiijiyada laga lahaa heshiiska saldhiga Milateri ee Berbera uu qeyb ka yahay dagaalka ka socda Yemen, isagoo xusay in dowladaha khaliijka ay u baahan yihiin Saldhig Milateri.
Xildhibaanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in la cadeeyo sirta ku jirta heshiiskaas iyo hadii aanay aheyn arrin dhaawaceyn midnimada iyo jiritaanka qaranimada, isagoo xusay in hadii arrinta Yemen kaliya tahay aysan Soomaaliya diidaneyn, balse waxaa uu is weydiiyay waxa sir ka dhigay markii hore heshiiskaas.
Sidoo kale waxaa uu xusay in dowladda uu hoggaamiyo Madaxweyne Farmaajo ay wada hadal ka geli karto arrintan, si wixii mugdi ee ku jira heshiiskaas iftiinka loo keeno, isla markaana ay u cadaato kaalinta dowladda Dhexe, shakigana jirana uu meesha ka baxo.
Dowladda Soomaaliya ayaa ka soo hor-jeesatay saldhiga Milateri ee Imaaraadka Carabta ka dhisanayo Berbera, kaddib markii ay heshiis la galeen Maamulka Somaliland.
Xiisada diblomaasiyadeed ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta ayaa cirka isku sii shareereysa, iyadoo maalmo ka hor Imaaraadka Carabta ay u yeeratay Safiirkeeda ku sugan Soomaaliya, taasoo ah arrin diblomaasi ah oo dhacda marka dowladuhu xurguf soo kala dhex gasho.